FANAPARAM-PAHEFANA : Olona ambony manakarama “gros bras” mibodo tanin’olona | NewsMada
Tandindomin-doza ireo ankohonana mipetraka amin’ireto.
Tranga iray isehoana fanaparam-pahefana ny fibodoana tanin’olona etsy amin’ny fokontany Mamory Miray Antoby, Kaominina Talatamaty, anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo. Tany efa vita “borne”, saingy nanakaramana olona ambony “gros bras” handroaka ny tompon’ny tany eo an-toerana…
Velon-taraina ny tompon’ny tany eny amin’ny fokontany Mamory Miray fa nanakaraman’olona ambony “Gros bras” izy ireo hanala azy ireo eo amin’ny toerany. Raha ny fantatra, tany mirefy 19ha 40A 80CA mitondra ny laharana TN°7187_H ao Antsahambilo, Kaominina Talatamaty, distrikan’Ambohidratrimo, efa nivoaka tamin’ny gazetim-panjakana tamin’ny 1935 no voalaza fa an’ireo tompon-tany, izay taranak’i Ombalahizadro. Nisy fitsirihina nataon’ny mpitsiri-tany, saingy tsy teo an-toerana ny tompon-tany satria mpampianatra ka lasa navadika ho tanim-panjakana, tamin’ny fotoan’androny. Ny ankohonan’ireo taranaka, izay mbola mipetraka eo amin’io tany mirefy 19ha 40A80Ca ary nanajary io toerana ao Antsahambilo io hatramin’izao. Efa nisy voly kesika izay nataon’ireo razamben’izy ireo teo, novidina tany amin’ny Rano sy ny ala ary misy taratasy ara-dalàna manamarina izany. Taty aoriana, nasain’ny sampandraharahan’ny fananan-tany nanao fangatahana indray ny tompon’ny tany, ny taona 1987. Nasaina nikarakara ny taratasy ary nanao ny fametrahana ny fandatsaham-bato. Nisy, araka izany, ny fandoavana vola ho saran’ny io fandatsaham-bato io intelo miantoana notanterahin’ity fianakaviana tompon’ny tany.
Ny taona 2009, nisy mpiasan’ny sampandraharahan’ny fananan-tany, izay lasa olona ambony nangataka, tamin’ny ampahan’io tany io, teny anivon’ny Sampandraharaha misahana ny fananan-tany, ary nahazo ampahany tamin’io tany io. Voalazana anefa, fa efa nandoa intelo miantoana ny “droit de bornage” ireto olona tompon’ny tany ireto
Ny manaitra amin’izao raharaha izao, milaza hametraka “borne” koa ireto olona ireto, saingy tsy nametraka akory fa ny “borne” izay efa nipetraka teo amin’ity toerana ity no nolokoin’izy ireo fotsiny. Ny tany rehetra izay efa hita ireo efa mitsinjara ao anatin’ny “état parcellaire”, izay amin’ny anaran’ny tompon’ny tany, Ranarivelo Fréderic sy ny tariny, izay efa 7ha17A83Ca sisa mitondra ny laharana (22+23+24+25+26), FN 37-H/87, saingy nomen’ny teo anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany an’ireo olona voalaza fa nangataka tamin’ny 2009 indray ireo tany voalaza ireo. Tandindomin-doza ireo ankohonana mipetraka eo amin’ity toerana ity, izay mitontaly 30 tafo eo amin’izao fotoana izao. Ny antony, misy teratany sinoa, Karana, Maorisianina tonga mandrefy ny tany eny. Efa mandeha eny amin’ny Fitsarana ny raharaha amin’izao fotoana izao. Tsy nijanona hatreo, fa efa nitondra ny raharaha eny anivon’ny Bianco koa ny tompon’ny tany, manoloana ny hosoka avo lenta miseho ato anatin’ity adin-tany ity.